22000 ~ 26000 Kyats
အဆိုပါ Street Light ကိုနိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီ ဒီဇိုင်းပုံစံ နှင့်အထူးဖန်တီး ထုတ်လုပ်ထားသည်။ ကောင်းမွန်သော အလင်းရောင်များ ရရှိနိုင်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်သည့် လမ်းမီးထွန်း မီးအိမ် တစ်မျိူးဖြစ်ပြီး သံချေးတက်ခြင်း နှင့် မိုးဒဏ် လေဒဏ်ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ရုံသာမက ပါဝင်သော LED မီးလုံးများသည် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောကြောင့် တစ်ခါ တပ်ဆင်ပြီး ရေရှည် အသုံးခံသော ပစ္စည်းများဖြင့် ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားသည်။ အရည်အသွေးမြင့်သော Lighting များကို တိုက်ရိုက်တင်သွင်းရောင်းချနေခြင်းကြောင့် အရည်အသွေးကို ၁၀၀% ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
18V LED Work Light Bare Tool
The Bosch GLI18V-420B 18V Max Worklight provides the brightest worklight (420 lumens) in its class, with three dynamic, innovative LEDs. The GLI18V-420 providesadial to adjust the light diffusion. Users are able to shineahigh-intensity spotlight onaspecific are where they need it. Or they can turn the dial foradiffuse flood light to brightenalarger area. Its swiveling stand andahard rubber mounting strap provides countless ways of positioning and directing the light, to illuminate any hard-to-reach work area. It boasts an extreme runtime, and, depending on the battery capacity, can run up to 13.5 hours ona6.0 Ah 18V battery (not included). The unit is extremely robust, due to its tough housing and aluminum heat sink.
HENGGUANG (ဟန်ကွမ်း) COB LED ဆလိုက်မီး (10W / 20W / 30W / 50W / 60W / 70W / 100W)
9500 ~ 62000 Kyats
အမျိုးအစား - HENGGUANG (ဟန်ကွမ်း) COB LED ဆလိုက်မီး အာမခံ - ၂ နှစ် မီးအား - 10W / 20W / 30W / 50W / 60W / 70W / 100W မီးအရောင် - 6500K အဖြူ / 3000K အဝါ ၁ ပါကင် -6လုံး - 20 လုံး
LED Round Panel Light 4
This ultra thin recessed LED Panel is absolutelyperfect for tight spaces, soffits and insulated and dropped ceilings. Recessed 4&quot; Round LED panle with integral driver In connection box. Fits where no other recessed fixture can. This LED is9watts and replacesa50 watt halogenSave up to 80% energy for same light output. The thin Panel profile with spring clips allows for quick and easy installation. Ideal for confined spaces and suitable for damp locations Available in all 4&quot; Round openings. Retrofit or New Construction Install Directly Under Joists, Maximum Layout Flexibility Comes with Junction Box &amp; Driver,No Housing Required Fast &amp; Easy To Install
China Made Swimming Pool Under Water LED Lights
China Made Swimming Pool UnderWater LED Lights နဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။အရည်အသွေးကောင်းသော ရေကူးကန်သုံး LED Light ကိုStainless Steel နှင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် သံချေးတက်ခြင်း နှင့် မိုးဒဏ် ရေဒဏ်ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ရုံသာမက ပါဝင်သော LED မီးလုံးများသည် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောကြောင့် တပ်ဆင်ပြီးအသုံးပြုသည့်အချိန်မှ ရေရှည်အသုံးခံသော ပစ္စည်းလည်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ပစ္စည်းကတော့ အဆင်မြင့်ရေကူးကန်များ နှင့် ဟိုတယ်ကြီးများ ကွန်ဒိုများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Sunlight Hanging lantern
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Zawgyi-One&quot;,&quot;sans-serif&quot;">လူကြီးမင်းတို့၏ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ နေအိမ်၊ အဆောက်အဦး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ နှင့် အစိုးရပရောဂျက်များ၏ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အကောင်းဆုံး / ယုံကြည်စိတ်အချရဆုံး အသုံးပြုနိုင်သော ဗီယက်နမ်နိုင်ငံထုတ်၊ LiOA (လီဝါး) အမှတ်တံဆိပ် Cables &amp; Wires များကို မြန်မာပြည်တစ်ဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ပစ္စည်းမှန်၊ ဈေးနှုန်းမှန်၊ အမျိုးအစားစုံလင်စွာဖြင့် In Stock ထားရှိကာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးဖြန့်ဖြူးရောင်း ချပေးလျှက်ရှိပါသည်။</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Zawgyi-One&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Arial, &quot;Arial Unicode MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">- Used from 5W to 18W Compact light</span><br></o:p></span></p>
Tuy-lip hanging lantern
70000 ~ 100000 Kyats
<p><span style="font-family: Zawgyi-One, sans-serif; font-size: 10pt;">လူကြီးမင်းတို့၏ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ နေအိမ်၊ အဆောက်အဦး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ နှင့် အစိုးရပရောဂျက်များ၏ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အကောင်းဆုံး / ယုံကြည်စိတ်အချရဆုံး အသုံးပြုနိုင်သော ဗီယက်နမ်နိုင်ငံထုတ်၊ LiOA (လီဝါး) အမှတ်တံဆိပ် Cables &amp; Wires များကို မြန်မာပြည်တစ်ဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ပစ္စည်းမှန်၊ ဈေးနှုန်းမှန်၊ အမျိုးအစားစုံလင်စွာဖြင့် In Stock ထားရှိကာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးဖြန့်ဖြူးရောင်း ချပေးလျှက်ရှိပါသည်။</span></p><p><font face="Zawgyi-One, sans-serif"><span style="font-size: 13.3333px;">Tuy-lip hanging lantern</span></font><br></p><p><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Arial, &quot;Arial Unicode MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">- Used from 5W to 13W Compact ball</span><br style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Arial, &quot;Arial Unicode MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Arial, &quot;Arial Unicode MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">- Color: white power, green, pink, red</span><br></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Zawgyi-One&quot;,&quot;sans-serif&quot;">လူကြီးမင်းတို့၏ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ နေအိမ်၊ အဆောက်အဦး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ နှင့် အစိုးရပရောဂျက်များ၏ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အကောင်းဆုံး / ယုံကြည်စိတ်အချရဆုံး အသုံးပြုနိုင်သော ဗီယက်နမ်နိုင်ငံထုတ်၊ LiOA (လီဝါး) အမှတ်တံဆိပ် Cables &amp; Wires များကို မြန်မာပြည်တစ်ဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ပစ္စည်းမှန်၊ ဈေးနှုန်းမှန်၊ အမျိုးအစားစုံလင်စွာဖြင့် In Stock ထားရှိကာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးဖြန့်ဖြူးရောင်း ချပေးလျှက်ရှိပါသည်။</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Arial, &quot;Arial Unicode MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal"><span style="color: rgb(37, 35, 122); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Arial, &quot;Arial Unicode MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">Sunlight Hanging lantern</span></p><p style="margin-bottom: 0px; padding: 0px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, Arial, &quot;Arial Unicode MS&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">- Used from 5W to 18W Compact ball</p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Zawgyi-One&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p>